1 Ahoana no ahafantarana raha nisy nomerao voasakana niantso anao
1.1 Ahoana no hahalalana raha misy laharana voasakana niantso ahy tamin'ny Android
1.2 Fampiharana Android hahafantarana raha misy laharana voasakana niantso anao
1.3 Ahoana no hahalalana raha misy laharana voasakana niantso ahy tamin'ny iPhone
Raha hitanao fa mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia satria efa imbetsaka ianao no nanontany tena toy izao:Ahoana no hahalalana raha nisy laharana voasakana niantso ahy? Soa ihany, anio no hahitanao ny valiny ary ho afaka hahafantatra ny fomba hafa rehetra tokony hahazoanao izany vaovao izany ianao, na inona na inona fitaovana anananao.
Hanombohana azy dia ho fantatrao ny fomba hahitanao ny nomeraon-telefaona voasakana niantso anao, raha Android ny findainao ary manana fitaovana mety amin'izany. Mifanohitra amin'izany aza, ho fantatrao koa izay rindranasa azonao ampiasaina mba hahazoana izany mombamomba izany, raha tsy miaraka amin'ny fitaovan'ny orinasa ny fitaovanao.
Farany, ho fantatrao ny dingana tokony harahina raha te hahalala raha iPhone ny telefaona anananao. Aza mitsahatra mamaky ary fantaro raha nisy laharana voasakana niantso anao.
Ahoana no ahafantarana raha nisy nomerao voasakana niantso anao
Azo antoka fa amin'ny fotoana iray anananao nanakana nomeraon-telefaona irayNa satria miantso anao tsy tapaka izy ireo ary manantona, io no isan'ny sakaizanao taloha na tsy te hiresaka amin'ilay olona intsony ianao. Na inona na inona antony, nanohy nanakana azy ianao ary te hahafantatra raha misy amin'ireo isa ireo no niantso anao foana, saingy tsy fantatrao ny fomba hahitana.
Soa ihany ho anao, misy safidy hafa ahafahanao mahazo izany fampahalalana izany, miankina amin'ny karazana finday izay anao. Noho izany antony izany dia hanazava ny tsirairay amin'izy ireo izahay eto ambany, mba hahafantaranao izay hampiasana arakaraka ny tranga misy anao:
Ahoana no hahalalana raha misy laharana voasakana niantso ahy tamin'ny Android
Tsy izao daholo Finday Android Izy ireo dia manana ny fitaovana fanakanana antso sy hafatra an-tsoratra napetraka. Amin'ity fitaovana ity dia tsy ho afaka manakana ny isa tsy ilaina fotsiny ianao, fa ho fantatrao koa raha nanohy niantso anao izy ireo.
Na izany aza, misy ny maodely toa ny Huawei izay, raha entin'izy ireo dia antsoina hoe "Saring Harassment" ary manana fiasan-kazo antso. Amin'ny alàlan'ity asa ity dia ho fantatrao raha misy amin'ireo isa nosakananao ireo niantso anao hatrany.
Mba hanaovana izany, ny fomba fanarahana dia tena tsotra ary ambonin'izany rehetra haingana, mba hahafahanao manamarina azy, jereo fotsiny ireo dingana izay hovakinao etsy ambany:
Sokafy ny rindrambaiko "Telefaona" amin'ny fitaovanao, io no misy headset ho icon.
Tsindrio izao ny kisary amin'ireo teboka telo izay hita eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny efijery.
Safidy maromaro no hiseho ary tsindrio ilay milaza hoe "Sivana fanararaotana".
Avy eo, safidio ny safidy izay milaza hoe "Call log."
Ary farany, ho hitanao ny firaketana ny antso voaray, saingy nosakanana izay tonga.
Ho afaka hahafantatra ny isan'ny fotoana niantsoana anao aza ny isa isaky ny sakananao. Toy izany koa, ho fantatrao ny daty sy ny ora nandraisana ireo antso tsirairay ireo.
Ahoana no ahafantaranao, fantaro raha a laharana voasakana Niantso anao izy dia mora be ary ny tsara indrindra, segondra vitsy monja ianao vao hahalala.
Fampiharana Android hahafantarana raha misy laharana voasakana niantso anao
Raha ny telefaona izao Android izay anananao dia tsy manolotra anao ny fitaovana hahafantarana raha nisy laharana voasakana niantso anao, manana ny safidinao ny fahalalana izany amin'ny fampiasana rindranasa. Amin'izao fotoana izao dia misy programa marobe izay hanampy anao amin'ny famotopotorana ataonao, na izany aza, ny "Sakano ary fantaro ny antso" no tena be mpampiasa.
Raha ny marina dia misy izy io ankehitriny misintona mihoatra ny 10.000.000 Ary izany dia satria ankoatry ny fahalalahanao miaraka aminy dia azonao atao izao manaraka izao:
Sakano ny laharana telefaona sy fifandraisana tsy ilaina.
Fantaro raha niantso anao foana ireo isa voasakana.
Araho ny toerana niantsoan'ny nomerao anao.
Sakano ny hafatra an-tsoratra.
Noho izany, raha te hampidina azy io dia tsy maintsy manana fitaovana miaraka amin'ny kinova miova amin'ny 4.1 ianao. Ary koa, tsy maintsy manana fahaiza-mitahiry 16MB misy ianao.
Raha vantany vao mahafeno ireo fepetra ireo ianao, dia mora be ny fametrahana ny rindranasa, toy ny hafa rehetra napetrakao ihany. Na izany aza, mba hahafantaranao tsara ireo dingana tokony harahina dia vakio eto ambany:
Sokafy ny Google Play Store amin'ny fitaovanao.
Rehefa miditra dia mandehana any amin'ny motera fikarohana sy ny karazana "Sakano ary fantaro ny antso".
Andraso segondra vitsy ary aorian'ny fisehony dia safidio ny safidy "Ampidiro.
Aorian'ny nametrahana azy dia araho ny torolàlana etsy ambany raha te hahafantatra raha nisy nomerao voasakana nanandrana nifandray anao:
Sokafy ny fampiharana "Sakano sy fantaro ny antso".
Rehefa miditra dia tsindrio ny "Menu" hita eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery.
Safidy maromaro no hiseho ary tsindrio ny "Call log".
Farany, zahao ny "antsipirian'ny antso voaray" ary dia izay.
Ho afaka hahita ny fampahalalana rehetra momba ny isa ianao, na dia nosakanana aza izy ireo dia miantso anao hatrany.
Ahoana no hahalalana raha misy laharana voasakana niantso ahy tamin'ny iPhone
Amin'izao fotoana izao, tsy misy finday iPhone mitondra fitaovana iray ahafahanao mamantatra raha nisy laharana voasakana niantso anao. Fa toy ny tamin'ny tranga teo aloha, azonao atao ny mametraka rindranasa hahalalanao izany fampahalalana izany.
Androany dia programa iray ihany no novolavolaina ho an'ity marika ity izay afaka manampy anao hahatratra izany tanjona izany ary antsoina izany "TrapCall". Maimaimpoana ity rindranasa ity ary azo alaina ao amin'ny App Store, noho izany, hahafahanao mametraka azy, dia izao manaraka izao ihany no hataonao:
Sokafy ny App Store amin'ny fitaovanao.
Rehefa ao anaty ianao dia soraty ao amin'ny motera fikarohana ny anaran'ilay fampiharana, amin'ity tranga ity "TrapCall".
Ary farany, raha vao miseho izy dia tsindrio ny "Get" dia izay no izy.
Rehefa napetraka tsara ny rindranasa dia tsy maintsy manaraka ny torolalana etsy ambany ianao hahitanao hoe iza ny isan'ny voasakana niantso anao foana:
Sokafy ny fampiharana izay napetrakao fotsiny.
Rehefa eo amin'ny pejin-tranony ianao dia kitiho ny safidy "Menu".
Safidy maromaro no hiseho ary hanisy marika ny "Fisoratana anarana" ianao.
Ary farany, hahita safidy maromaro ianao ary hisafidy ilay milaza hoe "Antso voasakana" ary dia izay.
Amin'izany fomba izany dia ho hitanao ny lisitry ny isa voasakana izay nanohy niantso anao. Ho fanampin'izay, ho afaka hahafantatra ny fahita matetika iantsoan'izy ireo anao sy ny fotoana nanatanterahan'izy ireo izany.
Ahoana no nahafahanao nilaza, miaraka amin'ireto sy ireo safidy voalaza etsy ambony dia mora tokoa ny mahafantatra ireo isa izay nanohy niantso anao na dia voasakana aza. Raha mazava aminao ity fampahalalana ity ary afaka namaly ny fanontanianao ianao,Ahoana no hahalalana raha nisy laharana voasakana niantso ahy? avelao izahay haneho hevitra ary hamaky hatrany an'ity bilaogy.
Previous: Previous post: Ahoana ny fandikana CD amin'ny PC-nao
Next: Next post: Ahoana ny famolavolana NTFS amin'ny alàlan'ny solosaina Mac OS